Nin yahow Qaado taladaan mar Dambe biya bax degdeg ah iskuma Arkeysid xogta sariirta | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Nin yahow Qaado taladaan mar Dambe biya bax degdeg ah iskuma Arkeysid xogta sariirta
Nin yahow Qaado taladaan mar Dambe biya bax degdeg ah iskuma Arkeysid xogta sariirta
Bulsha:- rag badan ayaa ka sheegta biyaha durba soo booda marka ay sidaas ay malabyarowga u giliyaan xubinta haweenka taasi oo ku reebta cuqdad nafsiyan ah , inkastoo ay jiraan dawooyin la qaato oo uu ugu caansan yahay kaniiniga Vegaraha la yiraahdo hadana waxa uu kugu reebayaa saameyn xoogan .
waxaan siineynaa hab sahlan oo aan rajeyneyno in aad wax badan isag dareemi doonto marka aad raacdo tilmaamaha aan ku siineyno .
1 Ugu horeyn xiliga weerarka aad sameyneyso isu tababar in aad niyadaada ka saarto ciyaarta socoto oo ka feker howlo kale oo banaanka ah .
2­ haku dheeraan in malabyarowga ku sii dhex jiro xubinta haweenka yacnii marka aad dareento in aad biyaha aad soo tuureyso soo bixi , daqiiqo naso ku laabo hadana la soo bax marka ay soo dhawadaan.
3­ biyo qaboow isticmaal , marka aad joojiso garaacidda biyo qaboow ku dhaq ama shukumaan biyo aad soo giliso ku qabo , biyaha qaboow aan ku
sheegaya ma ah kuwo baraf leh kaliya shukamaan qoyan , marka sidaas sameyso ku laabo hadana garaacidda .
4­waxaad galmadaada u badashaa habka faarisiga loo yaqaan oo haweeneyda ayaa sara mareysa , waayo taasi waxa ay yareyneysa cadaadis dhiiga ku soo shumabaya malabyarowga ee ka qeybta qaata howl galka galmada .